I-Kao the Kangaroo - Idethi yokukhishwa, umdlalo wegeyimu, nokuningi! - Ukudlala
Kulo nyaka, singalindela ukubona okuningi kwe-Kao the Kangaroo
U-Kao the Kangaroo, umdlali wenkundla kusukela ekuqaleni kwawo-2000, unikezwe ukulungiswa okuphelele yinkampani yasePoland i-Tate Multimedia, okuyenza ifinyeleleke kalula kubadlali abancane.
I-trailer yesimemezelo esanda kushicilelwa inikeze abalandeli ithuba lokubuka kancane lokho abangakulindela ekubuyeni kwesihloko esikhathini esizayo.
Sekuphele iminyaka engaphezu kwamashumi amabili kwaphuma okokuqala ochungechungeni. Umdlalo wegeyimu obonakalayo ubonakala uthuthuke kakhulu ku-trailer, futhi ngesizathu esihle: isikimu sombala ogqamile sifaneleka kangcono ithoni iyonke yegeyimu.
Idalulwe okokuqala ngoJuni 2020, umdlalo uzophawula uchungechunge lweminyaka engama-20 futhi uzokhishwa ngoJuni walowo nyaka.
Ihlobo lango-2022 licaciswa njengedethi yokukhishwa yokuqalisa kabusha okulandelayo, ngokusho kwamazwibela esimemezelo. Ngaphandle kwe-PC, i-PlayStation 4 ne-5, i-Xbox One & Series X|S, ne-Nintendo Switch, umdlalo uzokhishwa nakwezinye izinkundla.
Ngokubukeka, lo mdlalo ngokungangabazeki uzoqhubeka nomlando wabanduleli bawo.
*cindezela cindezela cindezela cindezela *
Vusa i-Kangaroo, unomhlaba ongawusindisa! pic.twitter.com/Q6LkW8YSbn
- Kao the Kangaroo (@Kaothekangaroo) Januwari 26, 2022
Kuqalwa ngezinkalankala ezingenangqondo ezifanayo ezivele kuvidiyo yohlu lwezifiso manje, amazwibela athatha ithuba elilula. Ngenkathi beqa izithiyo futhi bedlula ezitheni ezihlukene endaweni yepharadesi eshisayo, abadlali bathola amazwibela e-Kao elungisiwe njengoba elwa edabula ezindaweni ezimbalwa.
Ngokusho kokuthunyelwe okusemthethweni kwesihloko:
Phakathi nohambo lwakhe, u-Kao uzohlola inhlobonhlobo yezindawo ezinemininingwane emihle, ngayinye iphethe izimfihlo azozidalula. Ngaso sonke isikhathi, u-Kao ubhekana nezinselele ezintsha. Kuzodingeka asebenzise wonke amakhono akhe ngenkathi efunda amasha…akuwona wonke angokwemvelo emhlabeni aphila kuwo! Njengoba besho, wuhambo olusenzayo, hhayi indawo okuyiwa kuyo.
Ikhishwe ekuqaleni ngo-2000, i-Kao the Kangaroo kwakuwumdlalo owaziwa kakhulu we-platforming onabalandeli abaqinile. Indaba yayigxile kukhangaru elisencane okuthiwa uKao, owayehlala nomkhaya wakhe emaphandleni ase-Australia ngaleso sikhathi. Kwaba kuKao ukusindisa abantu bakhe lapho besongelwa ukuhlasela.
Ngokusebenzisa i-hashtag ye-Twitter ethi #BringKaoBack, abalandeli balethe ngempumelelo i-Kao the Kangaroo: Round 2 kuSteam ngoJuni walo nyaka.
Kulindeleke ukuthi ukwenziwa kabusha kwango-2022 kuzothwala abadlali asebekhulile babuyele enkathini ye-nostalgic yegeyimu yokuqala, kuyilapho kuhlinzeka abadlali abasha abanephalethi ebukekayo, umugqa wendaba ohehayo, nabalingiswa abathandwayo abapopayi.
Yilokho Konke Nge-Kao iKangaroo. Hlala ubukele ukuthola izibuyekezo eziningi futhi ubeke uphawu kusayithi lethu ukuze uthole izindaba ezengeziwe. Ngiyabonga Ngokufunda!
I-Clockwork Aquario - Ekugcineni Iza Ku-PC & Xbox!
I-Terra Invicta ibambezelekile kuze kube ngu-Q2 2022!
Idemo Yephrojekthi Ye-Warlock 2 Manje Isiyatholakala Ku-Steam
Idolobhana Elizulazulayo - Umakhi Wedolobha Oyingqayizivele!